भिजिट भिसामा यूएई लैजान ५ देखि ७ लाखसम्म असुली, श्रममन्त्री नै शङ्कामा Ukeraa – Latest and featured news from Nepal.
काठमाडौँ : श्रम स्वीकृति रोकिएपछि म्यानपावर व्यवसायी,ट्राभल्स एजेन्सी र गृह र श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा यूएई लैजाँदा प्रतिव्यक्ति ७ लाखसम्म असुलेको खुलेको छ।
श्रम स्वीकृति बन्द भएको बेलामा प्रत्येक दिन १५ हजार जनासम्म नेपाली महिला र पुरुष भिजिट भिसामा कामका लागि यूएई पुगेर अलपत्र परेका थिए। गत जनवरीदेखि २०२२ जनवरीसम्म ८१ हजार नेपाली टुरिस्ट भिसामा यूएई गएको तथ्याङ्क अध्यागमन विभागमा देखिन्छ।
यूएइमा गएका नेपालीहरू काम नपाएर अलपत्र परेपछि उनीहरूलाई अवैध रूपमा लैजान संलग्न समूहको खोजी गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले यूएईका नेपालका लागि राजदूतसँग पटक पटक वार्ता गरेर भिजिट भिसामा काम गर्न यूएई पुगेकाहरूलाई उतै सेटल गराउन प्रयास गरेका थिए। उनी गिरोहमाथि कारवाहीभन्दा उता पुगेकाहरुलाई उतै सेटल गराउन अझैँ प्रयासरत छन्।
नेपालका लागि युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) का राजदूत साइद हमदान अल नाकीसँग पटक-पटक छलफल गरे। अध्यागमनमा सेटिङ मार्फत म्यानपावर एजेन्सी र ट्राभल्स एजेन्सीले कामको लोभमा यूएई लगेको खुलेपछि गृहमन्त्रालयले छानविनका लागि समिति गठन गरेको थियो। समितिको काम सकिए पनि रिपोर्ट भने आइसकेको छैन।
छानबिनमा संलग्न स्रोतका अनुसार भिजिट भिसामा दुबई पुराइएका नेपाली अलपत्र परेको र वर्क परमिट नै नलिई काममा लगाएको खुलेको छ। यूएई पुगेर अलपत्र परेकाहरूले आफूहरूलाई कामको प्रलोभनमा यूएई पुर्‍याउन संलग्न रहेकाहरूको खुलासा गर्न थालेपछि मात्र बल्ल सरकार तातिदै समिति गठन गरेको थियो।
छानबिन समितिका एक सदस्यका अनुसार छानबिनमा भिजिट भिसामा ५ देखि ७ लाखसम्म असुल गरिएको देखिएको छ। उकेराले सोमबार प्रतिव्यक्ति थप ३० र ५० हजार लिएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो। स्रोतका अनुसार भिजिट भिसामा युएई जान चाहनेसँग ७ लाखसम्म असुलेर त्यसमध्ये प्रति पुरुष ३० हजार र महिलाको हकमा थप ५० हजार गृह मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयका अधिकारीलाई बुझाउने भन्दै गिरोहका सदस्यहरूले पैसा उठाएको खुलासा भएको थियो।
अर्को स्रोतले मङ्गलवार उकेरालाई भने ‘तपाईँहरूले ३० देखि ५० हजार लेख्नु भएको रहेछ। हामीले छानविन गर्दा ५ देखि ७ लाख सम्म असुल उपर भएको पाएका छौँ।’
छानबिनमा १२ वटा म्यानपावर एजेन्सी र केही ट्राभल्स एजेन्सी यो धन्दामा संलग्न रहेको देखिएको छ। कामको सिलसिलामा युएइमै रहेका केही नेपाली समेत यो धन्दामा संलग्न रहेको खुलेको छ।
धराशायी त्रिविका अनुसन्धान केन्द्र-४ : सुनसान सिनास, फर्किएला साख ?
२०७८ माघ १९ गते ११:३२ मा प्रकाशित
वि.सं. २०१८ सम्म जनगणना नै भएको भू-भाग गायब भएको सरकारले थाहा नै पाएको थिएन। २०३२ सालमा नक्सा निकाल्दा लिपुलेक, लिम्यिाधुराको भू-भाग समेटिएको चुच्चे नक्सा पनि....